Kuni faayidaa baramoo Naanna'aadha.
Gara qubannoo wantaa kan galmee keessaatti takkaan utaaluuf, wanta Naanna'aa keessaa lama cuqaasi.
Kamshaa Naanna'insa fayyadamuun gara wanta kan darbeetti ykn kan itti aanutti marsuu ni dandeessa.
SajooNaanna'iinsa kabala maraa sarjaa galmee barruu gadii jiran fayyadamuun kamshaa bani,ykn foddaa naanna'a keessatti.
Kamshaa Navigation irraatti, jalqaba akaakuu fili, sanaa booda qabduu Wanta Darbe ykn Wanta Itti Aanu keessaa tokko irratti cuqaasi. Maqaan qabdoota akaakuu ibsa, fakkeenyaaf, qabduun "Wanta Itti Aanu" akkaataa akaakuutti "Fuula Itti Aanu" ykn "Toorbarruu Itti Aanu" jedhamuu danda'a.
Title is: Naanna'insa Ariitiin Waantoota bira Qaqqabuuf